Teraka tamin'ny herinandro 39 herinandro
Ny vehivavy rehetra ao amin'ny fanjakana izay tsy manam-paharetana dia miandry ny fiandohan'ny fotoana hahaterahan'ny zaza. Araka ny fantatra dia ara-dalàna ny fe-potoana ara-dalàna ho an'ny zaza teraka eo anelanelan'ny herinandro 37-42 herinandro. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia teraka amin'ny herinandro 38-39 ny fitondrana vohoka.
Amin'ny firy no mampiteraka matetika ny vehivavy?
Ho an'ny fanombohana, tokony homarihina fa ny vohoka tsirairay, toy ny vatan'ny tenany ihany, dia manana ny toetrany manokana. Izany no antony mahatonga ny olona iray teraka aloha kokoa noho ilay napetraka, ary misy olona, ​​mifanohitra amin'izany, mandehandeha. Amin'ity tranga ity, misy ny antony maro mahakasika ny daty nahaterahana.
Ohatra, ireo mpahay siansa tandrefana dia nahatsikaritra fa amin'ny vehivavy miaraka amin'ny fiverimberenan'ny fadimbolana fohy dia hita matetika amin'ny 38 na 39 herinandro ny fitondrantena, ary ao amin'ireo reny miandry izay maharitra ela, amin'ny 41-42 herinandro.
Ankoatr'izany, misy karazana antontan'isa maromaro, araka ny fanamarihana fa ny fiterahana amin'ny herinandro faha-39 amin'ny vehivavy bevohoka dia hita manodidina ny 93-95% ny vehivavy. Raha manantena ny zaza voalohany, i E. Ny fahaterahana voalohany ny vehivavy, avy eo amin'ny herinandro 39 herinandro vohoka dia tsy mahagaga izany. Amin'ny 40, manakaiky ny herinandro 41, dia teraka ilay zazakely. Ankoatra izany, manodidina ny 6-9% amin'ireo vehivavy ireo no miteraka 42 ary na dia kely monja aza.
Raha misy vehivavy teraka fahatelo, dia mety hitera-doza ny zaza vao teraka amin'ny herinandro 39 herinandro. Matetika izy ireo no mitranga amin'ny 38-38,5.
Rahoviana ny dokotera no miresaka momba ny fiatoana?
Ao anatin'ireo tranga izay misy ny herinandro 42 isaky ny maha-bevohoka, ary tsy misy ireo mpitsoa-ponenana miasa , manomboka ny fanentanana ny mpampivelona. Noho izany, ny vehivavy bevohoka dia afaka mametaka gasy mba hanalefahana sy hanokatra ny tranon-kibo, hametraka ny dripoka amin'ny oxytocine, izay mahatonga ny fanombohana ny asa. Amin'ny toe-javatra tsirairay, ny tetika manokana dia mivoatra, izay miankina mivantana amin'ny fotoana, ny habeny, ny lanjan'ny foetus.
Symphysis aorian'ny fiterahana
Ahoana no hamahanana ny tenanao aorian'ny fiterahana?
Fialana amin'ny fluid amniotique
Fanazaran-tena ho an'ny diastase amin'ny rectus abdominis hozatra
Fizarana Cesarean - vanim-potoana taorian'izay
Birch avy amin'ny kavina - kilasy maoderina
Mpivarotra kiraro - ny modely modely sy tsara tarehy ho an'ny vehivavy
Ny endrik'i Rihanna
Kizil - toetra mahasoa ny taolana
Eva Mendes dia nanolotra ny akanjony manokana tao anaty sary superstyle
Mavo vita amin'ny volony
Nahoana no mipoitra ny masonao?
Fampianarana ara-tontolo iainana any amin'ny jadona
Taolam-paty teo aloha
Lavatera - fambolena sy fikarakarana, ary koa tsiambaratelo hafa amin'ny fambolena